Maraakiibta Ingiriiska oo la saarayo ilaalo hubaysan, si ay iskaga difaacaan weerarada burcad-badeedda. – Radio Daljir
London, Oct 30 ? R/wasaaraha dalka Britain David Cameroon ayaa ku dhawaaqay in maraakiibta ku goosheysa calanka Britain loo ogolaanayo ilaalo hubaysan, si looga hortago burcad-badeedda, waxaana uu tilmaamay in uu doonayo in la yareeyo qasaaraha kasoo gaaraya maraakiibta Ingiriiska xeebaha Somalia, halkaasi oo saannadkii hore lagu afduubtay 49 markab oo kamid ahaa 53 markab oo adduunka oo dhan lagu afduubtay.
Dawlada Britain, ayaa sheegaysa in aan weli la afduuban markab hubaysan, sidaa darteedna loo baahanyahay in maraakiibta la saaro ilaalo hubaysan oo difaaci karta marka ay kooxaha hubaysan ee burcad-badeeddu soo weeraraan, laakiin dejinta qawaaniinta maraakiibta Ingiriiska loogu ogolaanayo ilaalada hubaysan ayaa taabanaya 4 dal sida dalka Koonfur Africa, waxaana ay u baahanaysaa tixgelinta dalalkaasi.
Maraakiibta laga leeyahay dalka Britain, ayaa goor horeba iyagu shaqaalaysiiyey ilaaliyo hubaysan, si ay uga hortagaan kooxaha burcad-badeedda ah ee weerarada kusoo qaada.
R/wasaaraha Ingiriiska David Cameroon ayaa sheegay in arrintan sharci laga dhigi doono, kaddib wadahadalada dalalka Barwaaqa sooranka ama Common wealth-ka loo yaqaan oo hogaamiyayaashoodu ku shirsanyihiin dalka Australia .
R/wasaaraha Ingiriiska markii la weydiiyey in uu ku qanacsan yahay in hawl-wadeennada shirkadaha ilaalada ka haya Maraakiibta ay wax toogtaan, ayaa waxaa uu ku jawaabay” Waa in aan sameynaa kala doorasho, marka si saraaxa ah loo hadlana xajmiga afduubashada iyo madax-furashada ee maraakiibta dhulka biyaha Geeska Africa waa arrin dhibaato ku ah caalamka”.
Ra?iisul-wasaaraha Ingiriiska ayaa sheegay in koox yar oo burcad-badeed Somali ah ay madax-furasho u haystaan caalamka oo idil, waxaana uu tilmaamay in ganacsigii adduunka uu dhibaato la kulmayo, sidaa daraadeedna loo baahanyahay in la isaga yimaado oo go’aamo adag laga qaato.
Dalalka France iyo Spain ayaa taageero Militeri siinayey maraakiibta dalalkooda, waxaana tallaabo noocaas oo kale ah ka fekeraya dalka Talyaaniga.
Bishii July wasiirka xafiiska arrimaha dibada ee Ingiriiska Henry Bellingham ayaa sheegay in arrimo dhaqaale awgeed aan maraakiibta Boqortooyada Ingiriiska loo ogolaan karin in ay qaataan ilaalo hubaysan.
sida qorshuhu yahay, xoghayaha arrimaha gudaha ee Britain ayaa la siinayaa awood ah in uu bixiyo ruqsadaha ama Laysanka ku saabsan in maraakiibta Ingiriisku ay ilaalo hubaysan qortaan, waxaana iminka arrintaasi hor-taagan sharciga hubka.
Dawlada Britain ayaa sheegtay in ay qaadayso tallaabooyin kale oo lagula dagaallamayo burcad-badeeda, waxaana tallaabooyinkaasi ka mid ah in caawimaad la siiyo Keydka dalka kenya si loo daba galo hantida burcad-badeeda deetana loo fariisiyo, Waxaana reysalwasaaraha Ingiriiska uu sheegya in ay dalalka Seychelles iyo Mauritius ee ku yaalla badweynta India gacan ka siinayaan maxkmaadaynta kooxaha burcadda ah.